Dhaqanka & Qiimaha Shirkadda - NBC Electronic Technologic Co., Ltd.
Maxaa Houd loo Aasaasay
Mahadsanid macmiilka, aqoonsiga dhammaan shaqaalaha dadaalka badan, maskax-ballaadhan iyo naf-hurnimada macneheedu yahay HOUD (naxariis weyn, akhlaaq).
NBC micnaheedu waa maskax ballaadhan oo shaqaale ah, dulqaad, raadin kaamil ah oo naftooda ka sarraysa, macnaheedu waa ruuxa marnaba ha raagin, raadso heer sare. NBC waxay ka timid 3 garaaf oo ugu horreeya ku dhawaaqista Mandarin (NaBaiChuan), madow iyo guduudka astaanta micnaheedu waa "baddu waxay uruurisay boqolaal rives si ay u dejiso weynaanteeda" shirkadda.
Shirkadda Brand Anen, qaado magaca gaagaaban ee "Anen"
Ballan -qaadka Noocayaga
Badbaadinta tamarta lagu kalsoonaan karo iyo bay'ada.
Waxaan ku adkeysanaynaa jihaynta macmiilka, waxaan xooga saarnaa xiriirka macaamiisha Ka dhig macmiilka mid guulaysta, u soo dhowaada wada shaqayn muddo dheer ah iyo laba guul.
Ku qanacsanaantaadu ma aha natiijada, waa bilowgeena cusub.
Daacad ah oo lagu kalsoonaan karo: Si daacadnimo ah midba midka kale, si loo abuuro aasaaska shirkad. Naftaada daacad u noqo, mar walba diyaar u noqo masuuliyadaha, garaw xooggaaga iyo yaraanta naftaada, horumar joogto ah. Oo aan si daacad ah ula xiriirno qalbigeenna oo dhan, samee dadaalkeenna si aan u kasbanno kalsoonidaada.
Waxaan si taxaddar leh u dhegeysannaa talada shaqaalaha, waxaan si firfircoon ugala hadalnaa macaamilka mushkilad farsamo waxaanan u soo jeedinaynaa talo-bixinteenna, annagoo wadashaqeyn fog la yeelanay si loo hagaajiyo bay'ada warshadaha, loo abuuro qiime iyo wadaagga dheefta wada-jirka dadka leh, oo la wajaho fursadaha iyo loolankooda si wadajir ah.
Aamin NBC, waan dabooli karnaa rajadaada oo had iyo jeer wax yar ayaan ka hagaajinnaa! Iyada oo leh dabeecad wanaagsan, NBC waxay fahmi kartaa oo qabsan kartaa isbeddellada horumarinta warshadaha, iyadoo lagu saleynayo baahida macmiilka, hal -abuurnimada joogtada ah, sameynta koox farsamo oo xoog leh, waxay soo bandhigtaa badeecado tartan badan iyo xalka, u qiimeeya macaamilka si joogto ah.
Raadinta lamaanaha ganacsiga adduunka oo dhan, hawlgal maxalli ah, wuxuu siiyaa adeegga ugu wanaagsan macmiilka.
Sayniska, Daryeelka Aadanaha, Sharafta, Tayada, Jawaabta Degdegga ah, Raadinta heer sare.
Daacadnimo, tayo wanaagsan ayaa ku guuleysata kalsoonida, wax ku oolka ah, faa'idada wadaagga ah, gaaraa Win-Win.
Hal -ku -dhegga Ganacsiga
Sharaf, daacadnimo, ballanqaad, is-edbin, caddaalad
Iyada oo ku saleysan waddanka hooyo, u adeeg adduunka oo dhan, si aad u samayso shirkad caalami ah oo sharaf leh.
Ku adkee qiimaha jihaynta macmiilka, oo ku salaysan halgamayaasha, tallaabo tallaabo, si joogto ah u hagaajinaya ururka, habsocodka, wax soo saarka iyo guulaha, si shirkaddu u noqoto horumar deggan oo dheer. xeerarka abaalmarinta iyo ciqaabta; si buuxda ugu hoggaansamaan sharciga, u ilaali si caddaalad ah oo caddaalad ah, Deji barnaamij dhiirigelin macquul ah, si loo sameeyo heer lagu guuleysto shaqaalaha.
Si loo waafajiyo isbeddelka kacaanka ee warshadaha, Nabaichuan, shirkaddu waxay si joogto ah u cusbooneysiineysaa baahiyaha macaamiisha iyo tikniyoolajiyadda, furitaanka iyo iskaashiga warshadaha waxayna si joogto ah u abuurtaa qiime macaamiisha iyo bulshada. Nabaichuan wuxuu u heellan yahay kobcinta isgaarsiinta iyo nolosha dadka iyo hagaajinta hufnaanta shaqo. Isla mar ahaantaana, waxaan ku dadaaleynaa inaan noqono dooqa koowaad iyo lammaanaha ugu fiican ee macaamiisheena, oo aan noqono astaan ​​la jecel yahay.
Dhegaysi firfircoon oo si qoto dheer loo fahmo baahida macmiilka; si daacad ah u bixi adeeg kaamil ah.
Aadanaha u janjeedha, maamulka sayniska, heer sare ah.
Badbaadada iyo deegaanka, Horumarka is waafaqsan, qanacsanaanta macaamilka.
HOUD (NBC) waxay u malaynayaan Human Resource inay tahay aasaaska shirkadda iyo matoorka horumarka. NBC waxay raadisaa oo ku talisaa dadka kartida leh si firfircoon, ka hel dhammaan noocyada farsamada iyo kartida maamulka warshadahaan, si loo abuuro koox maareyn oo xoog leh iyo koox farsamo oo hal abuur leh.
Mabda 'asaasiga ah: Fursado u sii kuwa doonaya inay wax sameeyaan, u soo bandhig boos ku habboon kuwa wax qaban kara, abaal -mari kuwa wax sameeyey.
1. Xirfadaha xulashada
Heerka xulashada hibada, shakhsiyadda iyo isku xirnaanta ayaa ah tan ugu muhiimsan, anshaxa ayaa ah mudnaanta koowaad, markaa waxaan daryeelnaa rabitaankooda ah inay u shaqeeyaan shirkad, oo aan ilaalino ballanqaadkooda iyo hammigooda, markaa waxaan eegeynaa dadaalkooda iyo waayo -aragnimadooda shaqo, ugu dambayn waa iyaga weyn iyo waxbarasho.
2. Tababbarka hibada
Hagaajinta kartida shaqaalaha ayaa lagama maarmaan u ah horumarinta shirkadda, tababarka shaqaalaha ayaa aad muhiim ugu noqon doona tan. HOUD (NBC) waxay bixisay tababar laga soo bilaabo aqoonta aasaasiga ah ilaa xirfadda xirfadeed ee shaqaalaha iyadoo lagu saleynayo jagadooda iyo shuruudaha ganacsi. Shaqaale cusub wuxuu yeelan doonaa hanuunin dhammaystiran, qaabka horumarinta xirfadda-xirfadda ayaa loo isticmaalay si looga caawiyo shaqaalaha cusub inuu si dhakhso ah shaqada ula qabsado
3. Codsiga hibada
Siyaasadda dalabka kartida ee HOUD (NBC): ballanqaadka, rabitaanka barashada, karti wax ku ool ah oo xoog leh, diyaar u ah inuu qaado mas'uuliyado, edbin, koox wanaagsan oo shaqaysa. Iyada oo ku saleysan guusha, kartida waxaa lagu qiimeeyaa NBC, markii aad qabatay shaqo wanaagsan, aad u fiican, waxaa laguu dallacsiin doonaa boos sax ah si aad naftaada ugu hormariso ficil ahaan. Isla mar ahaantaana, dalabka hibada ayaa ku saleysan astaamahooda. Kuwa buuxin kara kartidiisa ayaa hibo u leh siyaabaha qaarkood. Waxaan siin doonaa boos sax ah shaqaalaha ku saleysan heerkooda, xooggooda, waaya aragnimadooda, dabeecadooda, hubinta in kartida aadanaha loo adeegsado faa'iidada ugu wanaagsan, hubiso in NBC ay si joogto ah u socoto, si dhaqso leh oo hufan.
4. Xirfadda hibada
Horumarinta shirkaddu waxay ka timaadaa tabarruca shaqaalaha, horumarinta shirkaddu waxay noqon doontaa shaqaale meel bannaan oo horumarineed.
HOUD (NBC) fiiro gaar ah u yeelo beerista shaqaalaha, kaydka iyo daryeelka si loo hubiyo in shaqaale kasta uu si farxad leh u shaqayn karo una horumarin karo kartidooda intii suurtogal ah. Waxqabadyo joogto ah ayaa loo qabtaa si loo hagaajiyo shaqada kooxda, loo hagaajiyo isgaarsiinta iyo isdhexgalka, loo hagaajiyo fahamka iyo isdhexgalka. Isla mar ahaantaana, barnaamijka dhiirrigelinta waxaa lagu habeeyay HOUD (NBC): "hal -abuurnimada maareynta iyo abaalmarinta soo jeedinta caqliga leh", "abaalmarinta shaqaalaha ee aadka u wanaagsan", "abaal -marin shaqaale oo aad u wanaagsan", "abaal -marin maamuleed aad u wanaagsan" oo loogu talagalay kuwa kaalin fiican ka qaatay shaqada . Iyo barnaamij nabadgelyo oo dhammaystiran ayaa la siiyay shaqaalaha, xafladda dhalashada ayaa loo qabtay shaqaalaha bil walba. Sannad kasta gunno ayaa lagu bixin doonaa waxqabadka iyo guulaha shaqaalaha. Waxaana barnaamijka bixitaanka shaqaalaha iyo tababarro loo fidiyay si kor loogu qaado kartida iyo qiimaha shaqaalaha.